Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Filohan'ny WTN Juergen Steinmetz hiasa ao amin'ny Birao AMFORHT
WTN on AMFORHT
Ny fivorian'ny General Association for the World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (AMFORHT) dia notontosaina androany ary notontosain'i Algeria.
Ny filohan'ny federasiona misahana ny fizahan-tany any Algeria, Said Boukhelif, dia nanazava ny antony manosika an'i Algeria hiditra ao amin'ny AMFORHT, ary noraisin'ny filohany, Andriamatoa Philippe Francois.
Mpikambana vaovao no notendrena sy natolotra. Anisan'izany:
• Hoy i Boukhelifa, filohan'ny federasionan'ny maso ivoho, Algeria
• Joumana Dammous, Talen'ny Hotel Fairs sy ny Hospitality News, Lebanon
• Mathieu Dati, talen'ny fiofanana, CECFB Abidjan, Ivory Coast
• Ismet Esenyel, Minisitra lefitra misahana ny fizahan-tany sy ny tontolo iainana, Sipra
• Mario Hardy, tale jeneralin'ny PATA, Thailand
• Sophie Lacour, talen'ny fikarohana, France
• Cote Moreno, Talen'ny Sekolin'ny Fizahantany, Nosy ETB Balearic, Espana
• Pasqual Porcel, talen'ny hotely, Nosy Réunion, Frantsa
• George Qiao, talen'ny fianaran-davitra, 9First, Sina
• Rodrigo Quintanilla, talen'ny Sekolin'ny kantin-tsakafo SCARTS, San Salvador, El Salvador
• Juergen Steinmetz, filohan'ny World Tourism Network, Hawaii, Etazonia
Juergen Steinmetz avy amin'ny World Tourism Network (WTN) dia nilaza tamin'ny fanendrena azy hoe: "Voninahitra ho ahy ny manompo ao amin'ity birao manan-danja ity mandritra ny roa taona." Steinmetz no mpanorina sy filohan'ny World Tourism Network (WTN).
Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) dia feo efa ela nialohan'ny orinasa kely sy salantsalany (SME) amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Amin'ny alàlan'ny fampitambarana ny ezaka, ny WTN dia mametraka lohalaharana ny filàna sy ny hetahetan'ireto orinasa ireto sy ireo mpiara-miasa aminy. Ny tambajotra dia manome feo ho an'ny SME amin'ny fivoriana fizahan-tany lehibe miaraka amin'ny tambajotra ilaina ho an'ireo mpikambana ao aminy izay misolo firenena mihoatra ny 120.